Miyuu Microsoft Surface ka fiican yahay kan ka iibiya iPad-ka Apple? | Wararka IPhone
Miyuu Microsoft Surface ka fiican yahay kan ka iibiya iPad-ka Apple?
In iPad-ka uusan ku socon waqtigiisii ​​ugu fiicnaa waa wax iska cad. Kiniiniga Apple-ka ayaa si aad ah ugu gabowday wixii alaab kasta oo Apple ah ay caadaysteen iyo iibinta iPad-ka noocyadiisa oo dhan way ka caqli badan yihiin kuwa xilliyada kale. Iyada oo ay taasi jirto, yaan lagu kadsoomin: iPad-ka wali si fiican ayuu wax u iibiyaa, in kasta oo tirooyin aad uga hooseeya sidii ay ahaan jireen. Si kastaba ha noqotee, Microsoft oo leh dusha sare waxay umuuqataa inay sii xoogeysaneyso, oo markaa waan arki karnaa haddii aan aqrino maqaallada lagu daabacay WinBeta, Forbes iyo boggag kale oo muhiim ah, oo sheeganaya in Microsoft ay ku guuleysatay inay Apple ku garaacdo iibinta kiniinka. Qof kastaa wuu ku deg degay inuu dhaho 'Surface' wuxuu horeyba uga fiicanyahay iPad-ka, laakiin aan fiirino qodobka asalka ah iyo waxa dhabta ah ee uu dhahayo, iyadoo laga tegayo cinwaannada tabloid.
Daraasadda ay qodobadani salka ku hayaan waxaa qaaday 1010Data, dhexdeedana waxaan ka arki karnaa in inta lagu jiro bisha Oktoobar 2015 Microsoft Surface uu ka badan yahay iibka dukaamada internetka marka loo eego Apple iPad. Waxaan ka hadleynaa oo keliya inta lagu jiro bisha Oktoobar, oo kaliya haddii aan tixgelinno dukaamada khadka tooska ah ee Mareykanka, ma leh dukaanno muuqaal ah ama ka baxsan waddankaas. Laakiin kaliya maahan faahfaahinta halkaan ku hartay ee daraasadda ka tagaysa waxoogaa "lagu qaatay badar milix ah," laakiin sidoo kale waxaa ku jira iibinta Microsoft oogada iyo Buugga Dusha. Haddii aan mar horeba u malaynayay in oo ay ku jiraan oogada oo isla qaybta ka ah Ipad-ku ay tahay wax xoogaa caddaalad darro ah (midda hore waa laptop ka badan kan kiniin ah), haddii aan horeyba ugu darno Buugga Dusha sare waxyaabaha way kasii darayaan, maxaa yeelay kani waa laptop saafi ah oo adag iyo in yar (ama wax uun) kuma xirna iPad-ka, xitaa kuma xirna iPad Pro. Miyaanay cadaalad ahayn in lagu daro iibka MacBooks kuwa iPad-yada ah?, sidaa darteed waxay ku tartami lahaayeen shuruudo siman.
Aynu sidoo kale eegno bisha ay wax waliba dhacayaan: Oktoobar. Oo weliba aan eegno garaafyada. Halka Microsoft uu soo gaadhay kor u kac weyn 25% ilaa 45% hal bil gudaheed, Apple ayaa hoos u dhacday isla bishaas iyadoo ka ahayd 35% ilaa 17%. Maaha wax kadis ah in bilowgii Oktoobar Microsoft ay soo bandhigtay muuqaalkeeda cusub halka Apple aysan soo bandhigin iPad Pro ilaa bartamihii Nofeembar. Sida had iyo jeer dhacda ka hor intaan la soo saarin wax soo saar cusub, iibinta kuwa noqon doona "kuwo duugoobay" ayaa hoos u dhacaya sababo la xiriira imaanshaha kuwa cusub.
Laakiin sida ugu fiican oo dhan ayaa ah: daraasadda kuma saleysna unugyada la iibiyay, laakiin waxay ku saleysan tahay dakhliga iibka. Magac ahaan, Daraasadda ayaa sheegtay in Microsoft ay iibiso kiniinno badan markii ay runti dhahdo inay lacag badan ka helayso, gaar ahaan tixgelinta in Surface-ka Microsoft uu celcelis ahaan yahay $ 844 iyo iPad-ka oo ah $ 392. Xaqiiqdii, maqaalka asalka ah by WinBeta Waxay ku qoran tahay lugaha mid ka mid ah sawirrada leh shaxanka (oo waxaan tarjumay macno ahaan):
Microsoft waxaa laga yaabaa inay kiniinno ka yar Apple ka iibiso internetka, laakiin qiimaha iibka dhexdhexaadka ee Microsoft waa labanlaab.
Waana marka la eego tirooyinka aan qabanno, Apple waa inay iibisaa laba jibbaar ka badan unugyada Microsoft si ay ugu dhigmaan iibka sida ku xusan daraasaddan, taasi waa, in In kasta oo Apple ay iibiso kiniinno ka badan kuwa Microsoft, maadaama shirkadda Microsoft ay laba jibbaar ka qaalisan tahay, wax kasta oo aan ahayn in la iibiyo wax ka badan laba jeer sida Microsoft u malaynayso in daraasaddan lagu sheegay inay iibinayso wax ka badan Apple.
Waxaan uga tagayaa garaafka ugu dambeeya daraasada dhamaadka. Iyadoo la tixgelinayo laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay (kaliya maahan bisha Oktoobar), kuwani waa iibka (waxaan ku adkeynayaa, lacag ahaan, maahan cutubyo) nooc kasta. In kasta oo ay xaqiiqda tahay in Microsoft ay buuggan dusha iyo buugga dusha ku ridanayso boorsadan, haddana celceliska qiimaha "kiniinnadaas" waa labanlaab ka Apple, Iibinta Apple waxay sii wadaa hogaaminta, ku dhowaad labanlaab kan Microsoft. Laakiin kuwan "minutiae" macno malahan markay daabacayaan maqaal, maxaa yeelay sida ay yiraahdaan, "runtu ma xumayso ciwaan wanaagsan."
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Miyuu Microsoft Surface ka fiican yahay kan ka iibiya iPad-ka Apple?
M $ badanaa dijo
Waa macquul in ipadku uu sii wadi doono inuu sifiican u sii iibiyo laakiin waxa iska cad ayaa ah in Cupertino ay durbaba ka cadaadeen kooxda la tartameysa inay garaacdo.
In kasta oo ay androids sii wadaan kiniiniyadooda dhexdhexaadka ah, oogada waxay caddeeyeen inuu yahay dilaa ipad dhab ah oo wuxuu ku dambayn doonaa ipad iibka, dhab ahaantii, haddii ay jiri lahaayeen dusha sare ee qiimaha ipad mini, waxay ahaan lahayd muddo dheer Waqti ka hor laakiin dusha sare Waa shey qaali ah wayna sii ahaan doontaa inay ilaaliso halo qiimo leh oo Apple aad u jeceshahay.
Ku jawaab M $ badanaa
Halkaas waxaan kugu siinayaa gabi ahaanba waa sax, runtiina Apple horay ayey u qaadatay talaabada ugu horeysa ee iPad Pro, in kastoo aan u maleynayo in is dhex galka barnaamijyada aaladaha mobilada iyo kombiyuutarada ay tahay in wali wax badan horay loo sii wado, maadaama hada ay uur ka sameysay Microsoft I do ma dhamaato arag.
Dusha sare 4 wuxuu ku cunay baradho ipadka pro for… iyadoo la adeegsanayo nidaam kombuyuutar !!! Tufaaxa lacagta aad haysato aad u adag ma waxay ahayd in la sameeyo OSX-taabasho ??? Microsoft waxay heleysaa baytariyada qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner' waa teknoolojiyad cusub oo ay microsoft ugu horeyso ee laga hirgaliyo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada waxayna cunayaan tufaax.
Ford wuxuu ku darayaa taageerada CarPlay baabuurtooda
Sidan ayaad ku furantahay dhalo shaambo ah iphone